YATHAZONE - Page2of 95 - NEWS and ENTERTAINMENT
ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေသော ရှေးထုံး အစဉ်အလာ စကားများ ၂
ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးရှိနေသော ရှေးထုံး အစဉ်အလာ စကားများ ၂ ၁ ။ သင်ဖြူးအိပ်ရာ ၊ ခေါင်းပေါင်းမှာ ထေးဖာ မသုံးနှင့် ။ ၂ ။ ရေလည်ခေါင်းပေါင်း မကောင်းတစ်လီ အင်္ကျီ လည်ခွံပြတ်စုတ် မချုပ်နှင့် ။ ၃ ။ ဥစ္စာမာန်အား ဤသုံးပါး ကိုယ်စား မပြုနှင့် ။ ၄ ။ လူကြီး မိဘ မိတ္တတစ်ထွေ မိုးမြေတစ်သင်း နေလမင်း မုန်းတင်းစကား မဆိုနှင့် ။ ၅ ။ သတင်းအရှိန် စည်းစိမ်ပညာကြီးသူမှာ ဝင်ကာမခိုသင့် ။ ၆ ။ သူ၏ ဦးခေါင်း တစ်ကြောင်း ကျည်ပွေ့ …
မယားတစ်ရက် ကျေးဇူးတစ်ရာ မယားတစ်ရက် မိန်းမသားတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်မယားလို့သက်မှတ်လိုက်တဲ့ အဲဒီတစ်ရက်ကို တစ်သက်လုံးမှတ်ထားမိဖို့ အလွန်အရေးကြီးတယ်။ အခုယူ အခုကွဲကြတာတွေ လောကမှာမြင်ရတာတွေကအများကြီးပဲ ဒါတွေဟာ ချစ်လို့လက်ထပ်တာဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် သံယောဇဉ်တွေကြောင့် လက်ထပ်ခဲ့တာမျိုး မဟုတ်ခဲ့ကြလို့ပါ။ သံယောဇဉ်ဆိုတာမျိုးက ဖြတ်တောက်ရတာအလွန်ခက်တဲ့အရာမျိုး ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် မျှော့သရေဖက်နဲ့တူတယ် သူ့ကိုစွဲလေလေ သူဟာရှေလာလေပဲ။ အချစ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးက ထန်းလျှက်ခဲကို ဝါးစားနေရသလိုမျိုးပါ စားနေတုန်းခဏတာပဲ စားနေသူချိုစေတာပါ။ မယားက မျက်စိဆိုရင် လင်ယောက်ျားက လက်ဖြစ်ရပါမယ် ဘာအကြောင်းကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် မယားဖြစ်သူမှာမျက်ရည်ကျတာမြင်ရင် လင်ယောက်ျားက လက်နဲ့သုတ်ပေးတတ်ရတယ် ဒါဟာ အချစ်လို့ခေါ်မလား ? ဒါမှမဟုတ် ယုယခြင်းတွေလို့ခေါ်ရမလား ? တစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူး ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်နဲ့ တစ်ခဏသာပေါင်းသင်းပြီးလမ်းခွဲလိုက်ရင် ဒါဟာ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဘာထူးတော့မှာလဲ မိန်းမသားတစ်ယောက်ကို …
Total Users : 253808
Total views : 688827